Hub mitondra (HUB mitondra) no tena anjara asan'ny mitondra sy mba hanome tari-dalana marina ho an'ny fihodinan'ny ny hub, dia samy mitondra axial entana sy radial entana, dia tena ampahany manan-danja. Ny kodiaran-kodiarana fiara nentim-paharazana dia ahitana andian-tare-roller roa na fametahana baolina. Ny fametrahana, ny menaka, ny famehezana ary ny fanitsiana ny fametahana ny bearings dia atao amin'ny tsipika famokarana fiara.
Ity rafitra ity dia manasarotra ny fanangonana ao amin'ny orinasa famokarana fiara, lafo vidy, tsy azo itokisana, ary rehefa voatazona ao amin'ny toerana fikojakojana ny fiara, dia ilaina ihany koa ny manadio, menaka ary manitsy ny mitondra. Ny kodiaran'ny kodiaran'ny kodiaran'ny kodia dia ao amin'ny fantsom-baolina mifandraika amin'ny angular contact ball bearings sy ny bearings roller tapered, mifototra amin'izany dia ho andiany roa ny mitondra amin'ny ankapobeny, manana ny fahombiazan'ny fanitsiana fanitsiana ny fivoriambe, azo esorina, lanjany maivana, rafitra matevina. , Enta-mavesatra lehibe, ho an'ny tombo-kase voaisy tombo-kase alohan'ny entana, ellipsis ivelany kodiarana menaka tombo-kase sy ny fikojakojana sns, ary efa be mpampiasa amin'ny fiara, Ao amin'ny kamiao mavesatra ihany koa dia manana fironana fampiharana fanitarana tsikelikely.
Fitambaran'ny fiarakodia taloha no tena nampiasaina tamin'ny tsipika tokana tared-roller na ball bearings. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia, ny kodiaran'ny fiara dia efa nampiasaina betsaka. Mitombo isan'andro ny isan'ny fampiasana sy ny fampiasana ireo tarika mitondra hub, ary efa novolavolaina ho taranaka fahatelo izao: ny taranaka voalohany dia misy tariby mifandray amin'ny zoro roa sosona. Ny taranaka faharoa dia manana flange ho an'ny fanamboarana ny mitondra eo amin'ny hazakazaka ivelany, izay azo amboarina tsotra izao eo amin'ny tànany mitondra ho any amin'ny kodia shaft amin'ny voanjo. Manamora ny fikojakojana fiara izany. Ny tarika fahatelo mitondra hub mitondra ny fitambaran'ny mitondra sy ny anti-hidy frein rafitra ABS.
teo aloha: tsara kalitao Industrial Drive Shafts
Manaraka: Fiara Japoney Universal Joint
Ratsy Wheel Hub Assembly
Fivoriambe Heavy Wheel Hub
Fivoriamben'ny Wheel Bearing Hub
Kodiarana Fivoriambe Parts
Fanoloana Fivoriambe Wheel Hub